Mashiinka Jarida Vision Laser - Goldenlaser
GOLDENLASER Range buuxa oo ah Nidaamyada Goynta Qalabka Laser Laser
Goynta laser sare ee sublimation dheeh dhar daabacan iyo textiles, tolmo wanaagsan ama daabac sumadaha, applique, sumadaha daabacay, lambarada, xarfaha, logos…
Mashiinnada goynta laser-ka xirfadleyda ah ee 'Goldenlaser' oo leh nidaamka aragga ayaa lagu horumariyey sannado khibrad u leh tikniyoolajiyadda dhameystirka ee horumarsan. Goldenlaser waxay ku dadaaleysaa inay kugu xoojiso xalka goynta leysarka si aad u keento tayo aan caadi aheyn, farsameyn caqli gal ah iyo saxnaan aan la dhaafin karin oo ku saabsan socodkaaga shaqada.
Qaab No.: QZDMJG-160100LD
Smart Vision Laser Cutter oo leh Kaameero Goynta Dusha
Kani waa mishiin awood badan oo leysarka goynta dusha sare. Iyada oo leh Kaamiro HD ah oo qalabaysan, mashiinku wuxuu qaadi karaa sawirro qaababka dhijitaalka ah ee daabacan ama lagu xardhay, aqoonsan karo qaabdhismeedka qaababka ka dibna ku siinayo tilmaamaha goynta madaxa laser-ka si uu u fuliyo
Qaab No.: CJGV160200LD
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Laser-ka oo leh Karbaash iyo Function Matching Plaid
Nidaamka Jarista Laserku wuxuu bixiyaa xal dhammaystiran oo loogu talagalay iswaafajinta otomaatigga ah ee astaamaha dharbaaxo dhar ah iyo lakabyo. Iyada oo kamarad CCD ah, nidaamka meelaynta saadaasha, barnaamijka buulka ku jira n
Qaab No.: CJGV-190130LD
Vision Laser Goynta Machine for Sublimation Daabacaan Maro
Goynta laser-ka ee leh Aqoonsiga Aragtida waxay u adeegtaa sidii nidaam goynta laser-ka kaamil ah oo loogu talagalay dheeh sublimation dheeh daabacaadda maryo. Kaamirooyinka ayaa baaraya dharka inta lagu gudajiro gudbiyaha, waxay ogaadaan dusha sare ee daabacan ama aqrisaa calaamadaha diiwaangelinta…